Ikwindla Ekhethekile Yasemuva [Enyakatho Yao. Burgundy] Tianzifang Garden House Loft Huanmao South Shaanxi Road/History Preservation Building/Latex Umatilasi/Subway 12/9
221 okushiwo abanye
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Yoyo
Phakathi nalolu bhubhane, ukuze ube nokuthula kwengqondo, siyakuthembisa futhi siqinisekisa ukubulawa kwamagciwane kuzo zonke izihambeli! ! !
[I-Burgundy] yindlu endala enendlu eyodwa. Zonke izinto nezinto lapha zibonisa ukuguquguquka kwazo nezindandatho zonyaka ezinhle,
Eduze ne-Tianzifang, isikhathi esedlule nesamanje sendlu engadini yaseFrance. Kunzima ukucabanga ukuthi umzila lapho i-bungalow ikhona empeleni "iBurgundy" -ukuhumusha okujwayelekile kwamagama ezindawo zesiFulentshi ahlala ebonakala ehlotshaniswa newayini elimnandi, ukukhanya kwelanga, kanye ne-manor. Azikho izindlu eziningi zakwaShikumen ezisele eShanghai, futhi izimpilo zabantu abavamile zigcinwe lapha. Ukuhamba ngezinyawo imizuzu emi-5 kuzokuyisa e-Tianzifang, ikhadi lebhizinisi lase-Shanghai, futhi ujabulele izitayela ezahlukene zase-Shanghai, inhloko-dolobha yomlingo.
.AmaFulentshi aklame umgwaqo omkhulu wamaShayina ovamile novamile emigwaqweni emibili yase-Lilong. Ngo-1930, izindlu zaseShanghai zakhiwe ngendlela yasentshonalanga, kanti isitayela "se-retro" sasiyimfashini e-Lilong. Phakathi kwezinkulungwane zama-alleys e-Shanghai, i-Bugaoli ihlukile, okungenzeka kube isizathu esibalulekile sokuthi kungani ibalwe phakathi kweqoqo lokuqala lezakhiwo zomlando ezivelele e-Shanghai.
.Liphume ikhehla likhuluma kahle isingisi, lomfokazi omhlophe okhuluma isiShayina, aphuce ikhanda alungise nezicathulo emgwaqeni, kwamakhelwane kunendawo yokudlela ende evela kwamanye amazwe. Kulo mkhakha othakazelisayo wangaphandle wamamayela ayishumi, endala nentsha, iMpumalanga neNtshonalanga ishayisana lapha, kodwa isikhathi, indawo, indlela, abalingiswa, yonke into iyisigaba segolide esilungile nesiphelele, esivumelanayo futhi esinobunye, ngaphandle kokuphazamiseka.
.Ba Jin, Hu Huaichen, Zhang Chenbo, Ping Hailan nabanye abantu abadumile baye bahlala lapha ngokulandelana.
Indlu ivulekile, inesitezi esiphezulu esingamamitha angu-4, igumbi lokuhlala elivulekile elinengadi encane ezimele ngaphandle, igumbi lokugezela elizimele kanye nekamelo lokulala elinethezekile.
.Ngemva kwesakhiwo esisha nokulungiswa kabusha, le ndlu eneminyaka eyi-100 inohlelo lwesimanje lomoya ohlanzekile kanye nokushisisa phansi kuyo yonke indlu.
Phansi - I-GROHE ingenise indlu yangasese ehlakaniphile kagesi, ishawa ye-TOTO, ikhishi lesimanjemanje elinesitayela sasentshonalanga, umshini wekhofi we-capsule ungaphila ngokunethezeka e-Shanghai ebandayo.
Phezulu - umatilasi we-latex ongu-1.8*2.0, igalari encane yesiFulentshi phakathi kwamapheshana, ehlanganisa ukulala nobuciko.
Amahora angu-24 i-Wi-Fi, amanzi ashisayo, iprojektha enkulu.
4.94 ·221 okushiwo abanye
4.94 · 221 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-221
IBurgundy itholakala endaweni ewumnyombo womhlaba wezomthetho. Izindawo zokuhlala eziseduze ziphelele kakhulu, kufaka phakathi izitolo ezinkulu nezincane, izitolo ezinkulu, izitolo zezingubo ezinhle nezesekeli, izitolo zekhofi ezahlukahlukene ezinezici ezahlukahlukene, izindawo zokudlela zasentshonalanga, amaShayina. izindawo zokudlela, amabha amancane nokunye. Uma uphuma, ungahambahamba ngaphansi kwezihlahla ze-French phoenix futhi uzwe ukungqubuzana nokuhlanganiswa kwamasiko aseNtshonalanga nawaseShayina.
Uma unesidingo, ungasishiya noma nini
UYoyo Ungumbungazi ovelele
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$79.